Ma dhabaa in uu Mareykanka ku biiray baadi goobka lagu soo xirayo Wasiir Janan - Awdinle Online
Ma dhabaa in uu Mareykanka ku biiray baadi goobka lagu soo xirayo Wasiir Janan
February 6, 2020 (Awdinle Online) –Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa Taliska Ciidamada Mareynkanka ee Afrika (Africom) kala hadlay sidii loo soo qaban lahaa Wasiirka amniga Maamulka Jubbaland oo hadda ku dhuumaaleysanaya qeybo ka mid ah gobolka Waqooyi Bari Kenya.
Taliyaha Ciidanka Xoogga dalka Generaal Odawaa Yuusuf Raage ayaa khadka Taleefan kula hadlay Thomas Waldhauser oo ah Taliyaha Ciidamada Mareynkanka ee Afrika (Africom),kaas oo uu kala hadlay sidii Dowladda Federaalka loogala shaqeyn lahaa in gacanteeda dib loogu soo celiyo Wasiir C/rashiid Janan oo baxsad ku ah dalka Kenya.
Sida aan xogta ku helnay Generaal Odawaa ayaa ka dalbaday Thomas Waldhauser iney muhiim tahay in Wasiir Janan la soo qabto si loo marsiiyo cadaaladda looga jaasayo dacadi dadweyne oo uu ka geystay qeybo ka mid ah gobolka Gedo,sida Hay’adaha xuquuqul aadanaha ay ku eedeeyeen.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa kal hore shaacisay in Wasiir Janan uu ka baxsaday halkii uu ku xirnaa,islamakaana ciidamada amnigu ay ku raadjoogaan,balse markii dambe la ogaaday inuu Kismaayo kaga sii gudbay dalka Kenya oo uu hadda ku sugan yahay.
Sidoo kale, Booliska Soomaaliyeed ayaa jaray warqad lagu soo xirayo Wasiirka,waxaana loo gudbiyo Booliska Aduunka “Interpol” si meeshii lagu arkayo looga soo qabto.
Dhanka kale, Dowladda Federaalka ayaa arrintaan darteed u eedeysay Kenya iney faragelin ku heyso arrimaha siyaasadda iyo amniga gudaha,waxayna uga digtay iney arrintaasi faraha kala baxdo.
Previous articleWar-torn Somalia wins rare praise from IMF and secures two key funding deals
Next articleFaarah Macalin:- Ciidanka Kenya waxa ay Soomaaliya u joogaan ka ganacsiga dhuxusha iyo Sokorta sharci darrada ah.